Fumanisa ukuba yintoni oza kuyibona kwisixeko saseWales saseCardiff | IBezzia
Yintoni ongayibona kwisixeko saseWales saseCardiff
Susana Garcia | 31/03/2021 10:00 | yokuPhila, Uhambo
La Isixeko saseWales saseCardiff sineziko eliyimbali kodwa ikwindawo yangoku. Ikomkhulu laseWales kunye nesixeko esincinci, esinokutyelelwa ngeenyawo nangexesha elifutshane, lisenza ukuba siyeke kangangeentsuku. Inqaba yokuqala kule ndawo isusela kumaxesha amaRoma kwaye namhlanje isayigcinile inqaba yayo entle, yenye yezona ndawo zayo zibalulekileyo nezibalulekileyo.
Lo Isixeko sinommandla wezibuko, eyenze ukuba ibe yindawo esebenzayo kakhulu. Ukongeza, ngexesha loHlaziyo lwezoShishino lakhula kakhulu, njengoko laba yeyona ndawo iphambili yamalahle aseBritane, eyona ndawo iphambili. Namhlanje sisixeko esizinikele ngakumbi kukhenketho esisinika iindawo ezininzi zokuzibona.
1 Inqaba yeCardiff
2 Iholo ledolophu yaseCardiff
3 IMyuziyam kaZwelonke yeCardiff
4 Ipaki yeBute
6 Intengiso yaseCardiff Victorian Central
Nguwo Inqaku elibaluleke kakhulu ukuba libonwe kwisixeko saseCardiff. Inqaba inemvelaphi kaNorman, nangona iye yahlaziywa ngokuhamba kwexesha. Uninzi lolungiso lubangelwe yileyo yenziwa ngenkulungwane ye-XNUMX ukuze ubone isitayile esithile se-eclectic. Inqaba ihleli kwinduli encinci kwaye ibonelela ngotyelelo olumnandi, kunye nezikhokelo zeaudiyo ezikhoyo. Kuyenzeka ukuba ubone imizobo yefresco, izakhiwo zomthi kunye namagumbi ahlukeneyo aza kusothusa ngemixube yawo. Ukongeza, unokunyuka kwiClock Tower ukonwabela iimbono.
Iholo ledolophu yaseCardiff
Iholo lesixeko li isakhiwo esikhulu etsala ingqalelo, ekuqaleni kwenkulungwane yamashumi amabini. Kuyenzeka ukuba undwendwele ngaphakathi kumagumbi avulekileyo, ke ngoko kunokuba lutyelelo olunomdla. Ungayibona into ebizwa ngokuba ligumbi leMarble ngemifanekiso eqingqiweyo yabantu ababalulekileyo kwimbali yaseWales. Kungenzeka ukuba sinokubona iGumbi leBhunga okanye iholo, amagumbi ahonjiswe ngononophelo olukhulu.
IMyuziyam kaZwelonke yeCardiff
Esi sakhiwo sikufutshane neHolo yesiXeko saseCardiff, ke sinokundwendwelwa kwangoko. Sisakhiwo se Isityalo se-neoclassical esigcina imyuziyam yesizwe. Yimyuziyam apho sifumana imiboniso eyahlukeneyo, ke ihlala igqibelele ukuhamba nosapho kwaye sonwabe kunye nemfundo. Singafumana kwimiboniso yesayensi yendalo okanye yezilwanyana kwimisebenzi ebalulekileyo ngababhali abanjengoVan Gogh okanye uRodin. Kukwakho nendawo yabantwana, ukuze bonwabe kwisayensi ngendlela esebenzayo kunye neyonwabisayo.
Kulo Intliziyo kaCardiff sifumana iPaki entle yeButeIpaki yasezidolophini entle kakhulu kufutshane nenqaba egudle uMlambo iTaff. Indawo efanelekileyo yokuphumla nokwenza iindlela ezahlukeneyo ezihamba ngayo, ngeenyawo okanye ngebhayisekile. Embindini wayo kukho indawo yokufunda ukuze ufunde okungakumbi malunga neentyatyambo nezilwanyana epakini.
Esi sixeko yayiliziko leVictorian apho kwakukho urhwebo oluninzi ngenxa yempembelelo yoHlaziyo lwezoShishino. Namhlanje sinokufumana iivali zeVictorian ezisasebenza kunye neendawo zorhwebo zokuthenga, ngoku ezijolise ngakumbi kukhenketho. Kodwa IRoyal Arcade yeyona galari indala yezo zisezidolophini kunye nesinye esinendlela entle. Yenye yezona ndawo zaziwayo nezona zilungileyo zokufumana izinto zokuhombisa okanye ezintle njengezikhumbuzo zaseWelsh, ke inokuba yenye yeendawo zokugqibela zokundwendwela.
Intengiso yaseCardiff Victorian Central
Ukuba ufuna funda ngakumbi malunga ne-wales gastronomy kwaye ukusuka esixekweni ungaya kwimarike esembindini. Isakhiwo esenziwe ngohlobo lwe-Victorian esinophahla lweglasi sihle kakhulu kwaye kuyo sinokufumana yonke into ukusuka kwiincwadi ezingamasekeni kuye kuzo zonke iintlobo zokutya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Yintoni ongayibona kwisixeko saseWales saseCardiff
Iimpawu ezintle zobuhle eziya kusindisa usuku lwakho
Uyikhathalela njani impilo yolusu lwakho